Igumbi labucala eChidambaram - I-Airbnb
Igumbi labucala eChidambaram
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSarala
Kwindawo enoxolo kakhulu Indlu yethu yeeNdwendwe ibamba amagumbi abucala aphindwe kabini kwiindwendwe ezinomnyango wabucala. Ifumaneka ngokufanelekileyo kubantu abaya kwiinkomfa / iiklasi kwiYunivesithi, abakhenkethi abatyelela itempile yaseNataraja / Thillai Kali Amman ngamaxesha ahlukeneyo kunye nabakhenkethi abatyelela ihlathi le-Photosvaram mangrove. Itempile yaseNataraja kunye neYunivesithi yase-Annamalai zikumgama okufutshane we-1-2 kms kwaye indlu yeendwendwe ikwindlela eya kwi-Photosvarm ukusuka kumbindi wedolophu yaseChidambaram.
Igumbi lihlala iindwendwe ezi-2 kodwa indawo yeendwendwe ezongezelelweyo ingafakwa kusetyenziswa umatrasi ophantsi. Igumbi lifakwe iibhedi ezimbini ezinomandlalo, iibhedi ezicocekileyo kunye nemiqamelo. Isepha kunye neshampu zinikiwe kodwa siyakucela ukuba uphathe itawuli yakho. Sikwabonelela ngeziselo ezincomekayo (iti nekofu) kunye neketile yombane ukuze iindwendwe zisebenzise. Igumbi linomoya ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo labucala. Igumbi lokuhlambela libonelela ngegunjana elingasentshona kunye negiza yokunikezela ngamanzi ashushu nangaliphi na ixesha lemini.
Igumbi lingabhukishwa iiveki/iinyanga ngexabiso lemvumelwano. Sikwanamanye amagumbi ama-3 anamaziko afanayo kwipropathi kwaye sinokubhukishwa ngokupheleleyo kwiintsapho ezinkulu/ibhetshi. Nceda uqhagamshelane nomninimzi ngefowuni ngeemfuno zokubhukisha ezinjalo.
Le ndawo ibekwe esweni ziikhamera zeCCTV kwaye ikwindawo yokuhlala. Kukwakho neendawo ezininzi zokutya ezithathwayo, imarike enkulu, iivenkile zonyango kunye ne-Ice Cream parlors ekoneni.
Umbuki zindwendwe ngu- Sarala
Umamkeli uhlala kwipropati enye kwaye uyafumaneka iiyure ezingama-24 nokuba ngefowuni okanye ngokobuqu. Umamkeli uya kubakho kwipropati ngexesha lokungena kunye nokuphuma. Ixesha lokungena liguquguquka oko kukuthi iindwendwe zingangena nangaliphi na ixesha losuku kwaye ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24 ukusuka kwixesha lokungena kujongwa ngobusuku obunye.
Umamkeli uhlala kwipropati enye kwaye uyafumaneka iiyure ezingama-24 nokuba ngefowuni okanye ngokobuqu. Umamkeli uya kubakho kwipropati ngexesha lokungena kunye nokuphuma. Ixesha l…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cuddalore